IL-76 ọhụrụ ahụ
ajụjụ IL-76 ọhụrụ ahụ
1 afọ 6 ọnwa gara aga #729 by AJT67
Hi onye obula,
M na-eche ma ọ dị onye ọ bụla na-enwe nsogbu ọ bụla na IL-76 ọhụrụ ahụ?
Mbụ, ọtụtụ ekele, ọ bụ nsụgharị dị ịtụnanya nke nnukwu ugbo elu nke m na-echere ruo ọtụtụ afọ, ma enwere m nsogbu abụọ, otu obere, na nke ọzọ enweghị ihe ọ bụla iji kwuo nke kachasị.
1. M na-agbalị iji chọpụta atụmatụ SHIFT + 4. Ọ dị onye ọ bụla ahaziri maka Saitek X-52?
2. Mgbe m kwụsịrị ịgba ọsọ, ọ na - ebelata FSX na aka nri aka nkuku m. Enweghị m ike ịkwaga windo ahụ gburugburu, ma mee ka m kwụsị ọrụ FSX iji mechie sim.
My sim dị na ụbọchị, na enweghị ihe ọ bụla ihe ọhụrụ arụnyere, N'ihi ya, m n'aka na nke a nwere ike ịbụ ihe na-esere ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere echiche ọ bụla gbasara otu esi edozi ihe ndị a, biko biko dobe m azịza.
Oge ike page: 0.285 sekọnd